Radio Don Bosco - Marka 1, 21-28
Marka 1, 21-28
Indray sabata, raha tonga tao an-tanànan’i Kafarnaôma i Jesoa sy ireo nanara-dia Azy, dia niditra tao amin’ny sinagôga, ary nampianatra azy ireo Izy. Dia gaga izy ireo tamin’ny fampianarany, satria nampianatra azy toy ny manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna. Ary tao amin’ny sinagôgany, dia nisy lehilahy anankiray azon’ny fanahy maloto, ary niantso mafy izy nanao hoe: "Mifampaninona izahay sy Ianao, ry Jesoa avy any Nazareta? Tonga hampahita loza anay va Ianao ? Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra". Fa nandrahona azy i Jesoa nanao hoe : "Mangina, ary mivoaha amin’io lehilahy io". Ary ny fanahy maloto nampifanintontsintona azy, dia niantso tamin’ny feo mahery ka nivoaka taminy. Gaga ny olona rehetra ka nifampilaza hoe : "Inona itý ? Fampianarana vaovao inona re itý ? fa ny fanahy maloto avy no didiany ka manaiky Azy". Dia niely eran’i Galilea rehetra ny lazany.